राहुल गान्धी किन गएका थिए ठमेलको नाइट क्लब ? - Meronews
क्लबको भिडियो भाईरल भएपछि भारतमा हंगामा
मेरोन्यूज २०७९ वैशाख २० गते १५:१७
काठमाडौं । यतीबेला सामजिक सञ्जालमा भारतीय कांग्रेस पार्टीका पूर्व अध्यक्ष राहुल गान्धीको एउटा भिडियो निकै चर्चामा छ । उनि ठमेलस्थित नाइट क्लब एलओडी (लर्ड अफ द ड्रिङ्क्स) मा गएको भिडियो पछिल्लो समय नेपाल र भारत दुबै देशमा चर्चाको विषय बनेको छ । अझ भन्ने हो भने, राहुल गान्धिको सो भिडियोका कारण नेपाल र भारत दुबै देशमा आलोचना गरिएको छ ।
चौतर्फी चर्चामा रहेको उक्त भिडियोमा राहुल एक महिलासँग छन् । उनले मोबाईल चलाएको पनि भिडियोमा स्पस्ट देखिन्छ । सोही भिडियोको आडमा विपक्षि दलहरुले भारतीय काँग्रेस र राहुल गान्धीमाथि तिव्र हमला गर्दै आएका छन् । उक्त भिडियोले भारतमासँगै नेपालमा पनि बढो चर्चामा छ । भारतीय काँग्रेस जस्तो लामो इतिहास बोकेको पार्टीका नेता नेपालको नाइट क्लबमा के गर्दै छन् ? र उनि किन नेपाल आए भन्ने कुरापनि उत्तिकै उत्कर्षमा छ ।
गान्धि सोमबार भिस्तारा एयरको विमानबाट काठमाडौँ ओर्लिएका थिए ।
स्रोतका अनुसार राहुल काठमाडौंमा आफ्नो साथिको विहेमा आएका हुन् । उनि आफैले पनि साथिको विवाहमा गएको र यो व्यक्तिगत यात्रा भएको प्रष्ट्याएका छन्।
म्यानमारका लागि पूर्वनेपाली राजदूत भीम उदासकी तथा पुर्वसचिवकी छोरी एवं सीएनएनकी पुर्वपत्रकार सुम्निमा उदासको विवाहमा सहभागि हुन आएको हो ।
राहुल नक्सालस्थित होटल मेरियटमा बसेका छन्। सुम्निमाको नीमा मार्टिन शेर्पासँग आज विहे हुँदैछ।
आफ्नो व्यक्तिगवत कामले नेपालमा रहेका गन्धीको भिडियो सार्वजनिक भएपछि भारतमा तरंग आएको छ । गान्धीका विपक्ष पार्टीले उनिमाथि तिव्र हमला समेत गरेका छन् ।
उनको भिडियोमाथि आलोचना गर्दै भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावालाले भनेका छन्, ‘राहुल गान्धीले के गरिरहेका छन्, यो उनको नीजि मामिला हो । तर जब राजस्थानको जोधपुरमा हिंसा भइरहेको छ, राजस्थानमा कांग्रेसको सरकार छ, राजस्थान जलिरहेको छ । यसमाथि चिन्ता व्यक्त गर्नुको साटो राहुल गान्धी नेपालको नाइटक्लबमा पार्टी गरिरहेको देखिएका छन् । जबकी उनी भारतका जनतासँग उनीहरुको समस्याबारे जान्न अग्रसर हुनुपर्दथ्यो ।’
केन्द्रीय कानुन न्यायमन्त्री किरेन रिजिजुले राहुल गान्धी भिडियो शेयर गर्दै अरुलाई उपदेश दिन सजिलो भएको तर आफूले कार्यान्वयन गर्न नपर्ने भनि प्रश्न गरेका छन्। एक सांसद र राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताको रुपमा यो कार्य उपयुक्त नभएको उनले बताएका छन् ।
भाजपाका अर्का नेता कपिल मिश्राले पनि ट्वीटरमार्फत राहुल गान्धी कोसँग डिस्को गएको भनि प्रश्न गरेका छन्। ‘के चिनियाँ एजेन्टसँग हुन्रु’ उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘के राहुलले सेनाविरुद्ध चिनियाँ दबाबमा ट्वीट गर्छन्रु’ उनले प्रश्न राहुलको होइन देशको भएको बताएका छन्।
भाजपा सामाजिक सञ्जाल इन्चार्ज अमित मालवीयले पनि राहुललाई व्यंग्य गरेका छन्। ‘जब मुम्बईमाथि हमला भएको थियो, तब पनि राहुल नाइट क्लबमा थिए। अहिले जब उनको पार्टी संकटमा छ, तब पनि नाइट क्लबमै छन्। उनमा निरन्तरता छ,’ उनले भनेका छन्।